हनिमुनको पहिलोदिन :: Hello NEPAL KOREA dot com ::
गृह पृष्ठ चुटकिला
प्रेमिका: हजुर ।
प्रेम: आजको म तिमीलाई एउटा कुरो सोधौँ ?
प्रेमिका: सोधन ।
उनीः के साँच्चै तिम्रो जिवनमा आएको म नै पहिलो पुरुष हुँ ?
प्रेमिका: हो नि । म पनि एउटा कुरो सोधौँ ?
प्रेमी: सोध न ।
प्रेमिका: किन सबैजना मलाई यही प्रश्न सोध्छन् जहिलेपनि डार्लिग् ?
• दुई केटि बिचको कुराकानि
• प्लेनमा रक्सि खाएपछि
• सुन्तली र धुर्मुस रातको १२ बज्नै लाग्दा
• बुढा बा को समस्या
• मिसकल दिएको छु
• कति नम्वर पुगेन
• जड्याहा भगवान
• धोएर फर्किहाल्छु
• हाकु र भिखारी
• प्रचण्डलाइ झापड खानबाट बचाएपछि
• औषधी पसल
• सानो कन्डम
• २,३ वटा ल्याऊ कि भनेर सोच्दै पो छु
• फेसबुक चलाएर के फाइदा ?
• बुढी कता छौ ?
• नर्स एक्लै छे
• झगडा हुने वाला छ
• BBA गर्छु
• बिहेमा किन रुन्छन केटीहरु
• बेकारमा छोरीलाइ नराम्रो सोचेछु